Posted by ကို Tranquillus | ဇန်နဝါရီ 6, 2018 | ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
သငျသညျသငျနှငျ့သင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိရပါဘူး overwhelms သောအဆိုးမြင်အတွေးတွေအဆုံးသတ်လိုသလား?
အဆိုးမြင်အတွေးတွေတစ်အိပ်မက်ဆိုးအတွက်တနေ့ upsetting နိုင်စွမ်းနှင့်ဖိအား, စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ် ...
ဤအစိတ်ခံစားမှုများကလွှမ်းမိုးသငျသညျထွက်ခွာ, သငျသညျအမျက်ဒေါသကိုသင်ဦးဆောင်လမ်းပြပါစေနှင့်သင့်အသက်တာ၌ပျော်ရွှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုယူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်ဦးစလုံး.
တစ်ဦးအပြုသဘောသဘောသဘာဝပင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, ဘယ်သူမှဒီအနုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်များက permeated ခံရဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။
သွားဆရာဝန်မှအဖြေအလည်အပတ်ခရီး? တစ်ဦးကစီစဉ်ထားအလုပ်အင်တာဗျူးဒီနေ့လယ်? ရှောက်သွားဖို့စာမေးပွဲဖြေဆို? ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများကိုအဆိုးဆုံးမျှော်လင့်ထားနှင့်ဤအခြေအနေများလျင်မြန်စွာစိုးရိမ်စိတ်စားစရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရုံ4အချက်များအတွက် ...5မိ, ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်သင့်အသက်တာ၌အဆိုးမြင်စိတ်တွေသက်ရောက်မှုကန့်သတ်မည်ကိုအကွံဉာဏျကနေဒီဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ပါ, စောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ရှိသမျှသောအမနေပါနဲ့:
1) ကြေးဇူးတငျစကား : သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်အရင်းအမြစ်!
2) ကအနုတ်လက္ခဏာလှိုင်းတံပိုး : အနုတ်လက္ခဏာလှိုင်းတံပိုးကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်!
3) ကဆွဲဆောင်မှု : အနုတ်အတှေး, အဆိုးမြင်အတွေးတွေဆွဲဆောင်တုံ့ပြန်။
4) external : ဒါဟာအပေါ်ရွှေ့နှင့်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ဖို့ပါးစပ်နှင့်စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပါမစ်အတွက်ခိုလှုံ, လူသိများသည်။ သငျသညျကိုလွှမ်းမိုးသောသူအပေါင်းတို့သည်ဤအနုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်သွန်ဖို့သတိရပါ။
5) Visual အပြုသဘောအခြေအနေများဆိုပါစို့။ တစ်ဦးကအရပ်တစ်ရှုခင်းတစ်ခွအေနအေ ... သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးနှင့်သင်ကောင်းသောစေ။
ထွက်ပြေးလာသောအဆိုပါသင်ကအပျက်သဘောဆောင်သောလှိုင်းတံပိုးတို့သည်အဆိုးမြင်အတွေးတွေ-ကာကွယ်ပါ မေလ 11th, 2020Tranquillus
အောက်ပါTuto.com: ကုန်သွယ်ရေးဒူ Net က Make ရန်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လူမှုသင်ယူအတွက်သင်တန်းများ။
သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လူအစုအဝေးမြို့မှ ထွက်. သင့်သလဲ